MACLUUMAADKA TARANKA YAR-SHAR-PEI DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Yar-Shar-Pei Dog iyo Sawirro
Fiona Mini Shar-Pei oo ah eey
Ghadafi-Shar-Pei waa inuu gaabnaadaa, ballaarraa oo u dhowaadaa laba jibaaran marka loo eego dhererka jidhka ilaa dhererka. Astaamaha ugu caansan waa duudduubnaanta, duuduubka madaxa iyo jirka. Madaxa waa inuu xoogaa ka weynaadaa marka loo eego jirka. Indhuhu waa inay ahaadaan kuwo mugdi ah, saafi ah oo u eg yicib, oo aan qoraxdu ka soo bixin ama aan soo bixin. Eeyaha milan, midabka isha ayaa laga yaabaa inuu waxyar ka fududyahay. Indhashareerka indhaha looma oggolaan doono giraanta. Dhagaha waa inay ahaadaan kuwo yar, saddexagal leh, qaro weyn, oo jiifa meel u dhow madaxa ayna doorbidayaan inay dib ugu laabmaan cirifka. Waa inay kala ballaadhiyaan oo ay hore ugu sii socdaan madaxa iyo xagasha isha. Waxaa laga yaabaa inay muujiyaan xoogaa dhaqdhaqaaq ah. Dhegaha biqilku waa u qalmid. Qalfoofku waa inuu ahaadaa mid fidsan oo ballaadhan oo leh joogsi dhexdhexaad ah, oo leh diyaaradda wejiga iyo dusha sare ee muuska. Afka waa inuu lahaadaa laf ku filan oo leh suuf ku filan si uu muuqaal laba jibbaaran ugu muujiyo madaxa iyada oo aan wax nabar ah lahayn. Duufaantu waa inay yara yaraadaan. Sanka waa weyn yahay waana ballaaran yahay waxaana laga yaabaa inuu mugdi madow yahay ama u ekaado midabka guud ee eyga. On eeyaha midabada fudud, sanka leben waa la aqbali karaa. Carrabka iyo gudaha afka waa la doorbidayaa buluug-madow. Carrabku waxoogaa wuu u khafiifi karaa culeyska kuleylka awgood. Ilkaha - qaniinyada maqaska ayaa la door bidaa. Leexashadu waa cilad. Qoorta waa dherer dhexdhexaad ah, muruqyo ah, oo si fiican garbaha loogu dhigay dharab badan. Topline ayaa waxyar ka dambeeya qallajinta oo wax yar ka sarreysa sinta. Laabku waa ballaadhan yahay, qoto dheer yahay, oo garabka ku fidsan yahay xusulka, oo xoogaa kor uga soo kacaya sinta hoose. Qurux-yaraanta waxoogaa hoos ugu sii jeedda illaa dabada sare. Dabada ayaa qaro weyn salka ku haysa, oo ku soo foorareysa dhibic waana inay duubnaataa. Gawaarida dabadu waa inay noqotaa kor iyo gadaal. Maqnaanshaha dabada oo dhammaystiran waa cillad ka-reebitaan. Garbaha waa muruqyo, foorarsanaya oo sifiican loo jiifiyay. Baarayaasha hore, marka laga fiiriyo xagga hore, waa inay ahaadaan kuwo toosan, dhexdhexaad ah oo xusullada u dhow jirka. Marka laga eego dhinaca, ciribta hore ayaa toosan oo leh laf ku filan, tiirarku waa kuwo xoogan oo jilicsan. Cagaha ayaa u dhigma cabbirka. Ka-qaadista cawrada hore ee dheecaanka ayaa la door bidaa. Bawdyaha waa muruqyo, buuxa oo si wanaagsan loogu qeexay angulation dhexdhexaad ah. Hocks-ka si fiican loo sii daayay ayaa gaagaaban oo dhinac u siman dhulka oo is barbar socda marka gadaal laga eego. Dib-u-dhigga dib-u-dhaca waa in laga saaraa. Dhererka jaakad la aqbali karo waxay noqon kartaa jaakad faras gaaban illaa dherer burush ah oo aan ka badnayn 1 inji gadaasha qoorta. Qaab dhismeedku wuxuu u dhexeyn karaa mid dhexdhexaad ah oo jilicsan oo jilicsan, iyada oo aan la ruxruxin ama aan xad dhaaf ahayn. Kaliya midabada adag ayaa la aqbali karaa. Ey midab adag leh ayaa laga yaabaa inuu yeesho hooska madow ee gadaashiisa iyo dhagaha ama timo madow oo dhan jaakada, sida sablega. Midab adag maahan qalad u qalma. Socodku waa mid isku dheelitiran oo bilaash ah. Lugaha hore iyo gadaal labadaba waa inay u janjeeraan xariiq dhexe oo leh xoog gaarsiin xoog leh iyo gaari gadaal ah.
Ghadafi-Shar-Pei waa inuu ahaadaa mid feejigan, kalsooni leh, ciyaar leh, la qabsan kara, kalgacal leh, si fudud u tababaran oo asal ahaan nadiif ah oo deggan. Mini Shar-Pei wuxuu aad ugu daacadsan yahay ilaaliyahiisa, ciyaar caqli badan, firfircoon, xukuma oo geesi ah. Waxay xiriir la leedahay qoyskeeda, laakiin maahan saaxiibtinimo shisheeyaha. Haddii eeygu la kulmo bisadaha iyo carruurta inta uu yar yahay, badanaa wax dhibaato ah kalama kulmayo iyaga. Ghadafi Shar-Pei wuxuu leeyahay weji wareersan, laakiin waa wax la yaab leh oo sahlan, deggen, madaxbannaan oo daacad ah. Waxay ka dhigtaa wehel farxad leh iyo ilaaliye wanaagsan. Ghadafi Shar-Pei wuxuu u baahan yahay ilaaliye kalsooni leh. Haddii aadan hubin, aan is beddelin, aad u jilicsan ama jilicsan, eeyga indhihiisa, waxay la wareegi doontaa sidii madax. Shar-Pei wuxuu u baahan yahay hay'ad maamul oo adag, laakiin jilicsan, oo si aad ah isugu habboon. Eyga waa in la baraa aadanaha oo dhan waa ka sarreeyaan isaga sida ay u kala horreeyaan. Kuwa isu arka inay ka sarreeyaan aadanaha waxay noqon doonaan kuwo madax adag oo geesinimo leh. Noocani wuxuu ubaahan yahay tababar addeecid adag hogaankiina dhis . Way diidi karaan amarrada xubnaha qoyska ee aan iyagu hoggaanka u dhisin. Waxay u baahan yihiin milkiile kaasoo awood ahaan noqon kara ' Eyga Sare '. Ghadafi-Shar-Pei guud ahaan wuu neceb yahay biyaha wuxuuna isku dayaa sida ugu macquulsan ee looga hortagi karo. Isku darka eeyaha kale mararka qaar waxay noqon kartaa dhibaato haddii mid ka mid ah eeyaha uu soo bandhigayo dabeecado ku badan. Bulsho waa muhiim. Qaar ka mid ah 'Miniature Shar-Pei' ayaa ka awood yar kuwa kale. The eeyaha dabeecad waxay kuxirantahay sida milkiilaha ayaa daweeya eeyga . Eeyaha loo oggol yahay inay rumaystaan ​​inay yihiin madaxa dadka ayaa horumarin doona arrimaha dhaqanka. Eeyo aan loo qaadan xirmo xirmo maalinle ah sidoo kale waxay bilaabi doonaan inay soo bandhigaan heerar kaladuwan oo arrimo ah. Qaar badan oo ka mid ah arrimaha caafimaad ee noocani waxay kuxiran yihiin khadadka ay ka yimaadeen. Khadadka Shar-Pei ee wanaagsan ma lahan dhibaato maqaarka ah, taas oo ah xaalad la iska dhaxlo.
Dhererka: 17 inji iyo wixii ka hooseeya (43 cm)
Miisaanka: 25 - 40 rodol (11 - 18 kg)
Qandhooyinka aan la garanayn halka ay ka yimaadeen ama cilladaha hocks-ka oo barara waxay noqon karaan marxaladaha hore ee amolydosis (kelyaha oo hawl gab) Mid ka mid ah fikradaha khaldan ayaa ah in Ghadafi Shar-Pei leedahay dhibaatooyin xagga maqaarka ah oo laalaabkooda awgiis. Haa, qaar yar oo Shar-Pei ah ayaa leh dhibaatooyin xagga maqaarka ah, laakiin maahan sababta oo ah eeyga oo laalaabku leeyahay, laakiin waa xaalad la iska dhaxlo. Caan ka noqoshada badan ee 1980s awgeed, qaar ka mid ah Shar-Pei waxay leeyihiin dhibaatooyin maqaarka la iska dhaxlo. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ka iibsato breed a sumcad leh, xaaladdan waa inaysan noqon wax dhibaato ah. U hubso inaad heshid breed oo ku dadaalaya eeyaha caafimaadka qaba.
Ghadafi Shar-Pei wuu ku fiicnaan doonaa aqalka dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Si dhexdhexaad ah ayuu gudaha ugu shaqeeyaa waxna wuu ku fiicnaan doonaa la'aan deyr. Sababtoo ah madaxiisa suufka, Miniature Shar-Pei aad ayuu ugu nugul yahay kuleylka. Hooska iyo biyaha waa in had iyo jeer la helaa. Haddii ay hesho jimicsi ku filan, waxay noqon doontaa mid nabdoon gudaha.
Shiine-ka yar ee Shar-Pei ayaa baahi weyn u qaba jimicsi, oo ay ku jiraan maalin kasta soco . Inta lagu jiro socodka eeyga waa in lagu sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaasha qofka haya hogaaminta, sida dareenku u sheego eeyga in hogaamiyaha uu ku hogaaminayo wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu yahay aadanaha. Ha ku dhaafin jimicsiga kuleylka, maadaama ay xasaasi u yihiin.
Ilaa 10 sano
Guntinta Shar-Pei waa in si joogto ah loo cadaydo. Dharkooda marna lama jarin. Noocani malaha jaakad hoosaad. Koodhka 'baadiyaha' wuxuu daadiyaa sanad yar, laakiin koodhka 'faraska' wuxuu u eg yahay inuu daadiyo keliya inta lagu jiro muddooyinka dhalaalida. Molshaha ayaa laga yaabaa inay uga tagto eeyga isagoo u muuqda inuu muuqdo. Maydhashada qiyaastii hal jeer usbuucii iyo cadayga jaakada maalin kasta inta lagu jiro muddadan waxay meesha ka saari doontaa timo duug ah, oo duug ah waxayna u oggolaan doontaa jaakad cusub inay ku soo baxdo. Milkiilayaasha qaar ayaa xasaasiyad ka qaba jaakadda adag.
Ghadafi-Shar-Pei waxaa loo soosaarayaa inuu yahay nooc hoos loo dhigay Shar-pei . Waa daahir Shar-Pei oo cabbirka yar-yar wuxuu ka yimaadaa hiddo-wadaha jimicsiga ee eeyahaani wataan DNA-kooda. Rajada ay leeyihiin abuureyaashu waa in taranka xulashada, hidda-wadaha recessive-ka uu dhaqso ugu soo bixi doono taranka. Mini Shar-Pei wuxuu AKC u aqoonsan yahay Shar-Pei, si kastaba ha ahaatee cabirka eeygan ayaga ma aqoonsan waxaana loo arkaa inay qalad ku yihiin giraanta showga. Abtirsiimada Shar-Pei lama hubo. Waxay noqon kartaa farac ka tirsan Chow Chow, hase yeeshe, xiriirka kaliya ee cad ee ka dhexeeya kuwani waa carrabka guduudan. Si kastaba ha noqotee, sawirro ku yaal dheryuhu waxay soo jeedinayaan in noocyadu ay ku sugnaayeen xitaa Han Dynasty (206 BC). Sanado badan Shar-Pei waxaa lagu hayey eey ujeedo guud ah oo laga leeyahay baadiyaha Shiinaha, waxaa loo isticmaali jiray ugaarsiga, ilaalinta kaydka, iyo ilaalinta guriga iyo qoyska. Waqtigaas Shar-Pei waxaa loo soo saaray sirdoon, xoog iyo wejigiisa murugaysan. Markii dambe, waxaa loo adeegsaday dagaalka eyga. Maqaarka dabacsan iyo jaakad aad u jilicsan ayaa loo sameeyay si eyga looga caawiyo dagaalka, taasoo Shar-Pei ka dhigeysa mid ku adag qofka ka soo horjeeda inuu qabsado oo uu xajiyo. Intii lagu gudajiray kacaankii shuuciga, eeyaha waxaa badbaadiyay ganacsade reer Hong Kong ah oo lagu magacaabo Matgo Law, kaasoo ka codsaday dadka Mareykanka 1973 iyada oo loo marayo majaladda eeyga si loo badbaadiyo taranka. Tijaabooyinkaas yar, shar-Pei wuxuu si aad ah u koray tobannaan sano ee la soo dhaafay. Hadda Shar-Pei wuxuu ku jiraa kooxda aan Sportiga ahayn ee AKC iyadoo in ka badan 70,000 eeyo ah loo diiwaangeliyey inay yihiin keyd aasaasi ah. Markii ugu horreysay ee la soo bandhigo, Shar-Pei wuxuu ahaa mid qaali ah. Hadda waxay ku kacayaan qiimo la mid ah eey kasta oo saafi ah.
Koonfurta, AKC-aan Ciyaaraha ahayn
ACA = Ururka Canine American
FCI = Xiriirka Caalamiga ah ee 'Cynologique Internationale'
MSPCA = Naadiga Shar-Pei ee Yaryar ee Mareykanka
'Winston waa 6 bilood jir, 32.7 lbs., 11 inji dherer ah, 23 inji dherer ah Winston hadda waa eey buuxa oo waardiye ah, wuxuu u koray si dhammaystiran xayawaan qasab ah , iyo inkasta oo ay jiraan codsiyo, fasalo, qoorgooyo iyo tababar shaqsiyeed, haddana waxaa ka go'an inay ka qeyliyaan wax kasta oo dhiirrigeliya inay buuq sameeyaan. Isagu waa xoog rabay , feejignaan leh oo buuxa tamarta had iyo jeer. Indhaha Winston waxay ka baxeen buluug ilaa bunni laakiin taasi waa la filayay. Looma baahna qalliinno loogu talagalay maqaarka indhaha oo dheeri ah inta badan wuxuu lumiyay laalaabkiisa.
'Inkasta oo ay adag tahay in dareenkiisa lagu ilaaliyo banaanka guriga, marka la awoodo abuuritaanka jawi waxbarasho oo deggan wuxuu si dhakhso leh uga jawaab celiyaa isla markaana wuxuu qaataa amarro isla markiiba u dhow. Xaqiiqdii ma jirto wax diidaya in noocani yahay mid caqli badan, Winston kaliya ma ogaan karo qaabkeena, laakiin markii uu ogaado inuu sameynayo wax qalad ah wuxuu sugi doonaa ilaa qof walba uu ku mashquulsan yahay inuu wax qabto. In kasta oo aan la dhaqannay isaga illaa uu jiray 6 toddobaad, haddana wuxuu soo saaray 3 astaamo oo xiiso leh. 1) Qofbaa habboon isaga ka reeb dhinacyada kale wuu qaylin doonaa, oo qaylada waxaan ula jeedaa baroor-diiq sare oo waliba lagu daray markii la isku dayayo qubeyska, arooska ama cirbadaha . Waxaan u dhaqaaqay inaan iibsado qoorta jilif ee Winston, laakiin runti wax saameyn ah kuma yeelan isaga dhinac uun. 2) Kooxo ka kooban 2 ama in ka badan oo ah dad maqaar madow ah oo isku dayaya inay xayawaan ama u dhowaadaan isaga ayaa kaxeeya. Tani waa mid xiiso leh maxaa yeelay ma uusan qabin jahwareer hore ee puppy. 3) Winston waa burburiyaha Caalamka markii keligaa laga tago . Waxaan rumeysanahay inaan tan u nisbeyn karo inaan isaga ag joogo 5-ta bilood ee ugu horreysa joogsi la'aan iyo inaan si lama filaan ah ugu laabto shaqada iyo iskuulka.
'6 bilood gudahood waxaan ku bartay in noocani markasta ahaado sanduuq tababaran iyo bulsho . Waxaan aad u aaminsanahay in ku darista Mini Shar-Pei qoys leh eey qaangaar ah oo tababaran ay faa iidada ugu badan tahay, maaddaama Winston uu si toos ah ugu dayan karo dhaqanka eyga. Weligaa ha joojin la dhaqanka bulshada, Winston ayaa helay xirfad badan tan iyo markii uu weynaaday oo hadda waxay ku qaadataa waqti inuu kula kulmo dad cusub. Isku soo wada duuboo, Winston waa xayawaan layaableh oo caqli badan, wuu iga qosliyaa maalin kasta oo markii la dhexdhexaadiyana waxaan aaminsanahay inuu noqon doono xayawaan aad u deggan, raaxo leh oo uu la falgalo. Weligiis muu muujin calaamado gardarro wuxuuna had iyo jeer sugayaa amar, eray naxariis leh ama daaweyn. Hadduu yeesho laalaab badan, wuxuu ahaan lahaa muunad weyn oo la soo saaro.
'Kani waa Winston Chen, oo ah Yar Shar-Pei yar oo jira 6 1/2 toddobaad. Waxaan sawirkan ka qaaday beerta nasashada maalintii saddexaad ee aan haysto. Dhimashada fiidmeerta wuxuu aaday musqusha bannaanka, si dhib yar weligiis wax shilal ah gudaha ugama gelin. Si otomaatig ah ayuu noogu soo daba maray baarkinka isagoon xadhig lahayn, weligiisna ma cararin mana eryanayn cidna. Winston waa eeygii ugu cajiibka badnaa ee aan abid la kulmo, laga soo bilaabo shakhsiyadiisa la jecel yahay ilaa dabeecadiisa fudeyd badan. In kasta oo taariikhda noocyadu tahay, waxba kama qabo biyaha haba yaraatee, isagu waa cuneeye / qadhaadh, laakiin si dhakhso leh ayuu u dhagaystaa oo wax u bartaa. Winston guud ahaan wuxuu helaa hal socod oo 45 daqiiqo ah maalintii. In kasta oo uu xariiq adag (taas oo soo baxda markaan u sheegno 'Maya') isagu waa qof aad u jecel oo daryeela. Khuuro lahayn, farting ugu yar ka sokow sariirtiisa oo hungurigu ku dheggan yahay waa cayayaanka sariirta qof walba. Waxaan hadda ku noolahay guri dabaq ah kaas oo umuuqda inuu sifiican ugufiican yahay inta uu yahay jimicsi maalin kasta . Xusuusin dhinac ah wuxuu gabi ahaanba neceb yahay toy-gii asalka ahaa ee Kong oo ma doonayo inuu wax ku sameeyo halkii isagu calalin roogga, sharaabaadyada iyo tuwaallada leh xiisaha ugu yar ee kubbadaha teniska. Wuxuu dhashay 11/28/10, 6 usbuuc wuxuu culeyskiisu ahaa 5.9 rodol, 7 todobaad wuxuu hada culeyskiisu yahay 7.3 rodol. Guud ahaan aad ayaan ugu faraxsanahay doorashadan taranka, waxaan ogaaday inuu yahay eey layaableh inkasta oo uu intaas uun yahay isla markaana sida ugu macquulsan ee bulsheed u noqon doono qof weyn daaweynta iyo eeyga qoyska . '
Koshue Shoio oo ah Mini-Shar-Pei oo 7 sano jir ah— 'Koshue Shoio waa Mini Shar Pei. Waxaan helay iyada ka dib dhimashadayda cabirka caadiga ah Shar Pei . Jacayl ayaan ku qaaday taranka ka dib markii aan badbaadiyay kii iigu horreeyay, Taz. Waxay noqon karaan kuwo madax adag, laakiin waa kuwo jecel, daacad ah oo saaxiibtinimo leh. Waxay sidoo kale noqon karaan kuwo aad u qosol badan. Eygaygu wuxuu daawadaa TV-ga oo wuxuu umuuqdaa inuu raadinayo gadaashiisa si loo helo waxa meesha ka jira. Way fududahay in la daweeyo markii loo baahdo, laakiin iyadu aad bey u khiyaano badan tahay. Waxay leedahay ey ey leedahay, oo doorbideyso Chihuahua ama Chi iskutallaab Kuma faraxsanaan xayawaankeeda la'aantiis. Way jeceshahay bisadaha sidoo kale.
Eeg tusaalooyin badan oo ah Standard Shar-Pei
Cudurka Dog yar
shar pei pit mix mix
Jack Russell eyda Pit isku qasan
Cocker collie xadka qas spaniel muqisho
bo chi puppy ee iibka ah
mini adhijire australia madow iyo caddaan
bulldog american mareykan iyo cadaan ah